Ka Lugood Bedelka Music inay iPad
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Songs ka Lugood in iPad
Weli isticmaali Lugood heeso ka Lugood wareejiyo iPad 2? Maxay ku saabsan tan oo heeso iyo playlists in aad hore ku daray in ay aad iPad 2? Iyaga weligood waayaya? Taasi ma u muuqataa wanaagsan.
Xaaladdan oo kale, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin ah Lugood awood leh in ay iPad qalab kala iibsiga. Waa Wondershare TunesGo (Windows). Iyada oo ay caawimaad, waxaad ka Lugood si fudud ku wareejin karaa music in iPad, iyadoo aan waxba laga badiyay. Marnaba ma u baahan yihiin inay ku qaataan waqti badan in xulashada heesaha oo aad jeceshahay in lagu wareejiyo. Halkii, aad awoodi karaan inay si toos ah nuqul playlists aad jeceshahay in aad iPad.
Download qalab si aad nuqulka heeso ka Lugood in iPad.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo sidoo kale aad ku xoojiya sidii ay u guuraan songs on iPad dib ugu maktabadda Lugood .
Tallaabooyinka Easy in ay heeso ka Lugood wareejiyo iPad
Download iyo rakibi qalab this on your computer ka hor ka dib markii ay talaabooyin fudud ee hoose. Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, iyo Windows Vista.
Tallaabada 1. Isku aad iPad la kombiyuutarka
Bilowga, ordo qalabka on your computer. Markaas xiriiriyaan iPad la your computer via cable USB ah. Marka uu ku xiran, barnaamijkan isla markiiba waxaa lagu ogaan doonaa.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood on your computer si aad u hesho TunesGo si fiican u shaqeeyay.
Tallaabada 2. heeso ka dhaqaaq Lugood in iPad
Si aad u dhaqaaqo songs Lugood in iPad, idinku waajibka ah inaad riix "playlist" tab geedka buugga bidix. Marka uu furmo suuqa playlist ka soo booda, guji saddexagalka hoos batoonka "Add". In liiska jiido-hoos, doortaan "Add Lugood Playlists". Markaas, daaqad yar oo booda. By default, oo dhan playlists ayaa la hubinayaa. Saar marks ka hor playlists rabin. Markaas, guji "OK".
Fadlan ha barkinta aad iPad inta lagu jiro kala iibsiga. Marka ay ka badan, waxaad ka heli doontaa in playlists ah ayaa on your iPad.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPad daydo socda macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8, iOS9 oo kala ah, iPad Air, iPad mini, iPad bandhigay isha, New iPad ayaa, iPad 2 iyo iPad (horeysay ee Qarni).
Waa hagaag, barnaamijkan waa run ahaantii waxtar leh. Marka laga reebo heeso ka Lugood gudbaayo iPad, aad awoodaan in ay dhoofin heeso ka your computer si aad iPad , iyo qeybsanaan. Heeso ka sokow, waxa ay kaa caawinaysaa in aad maamuli photos, videos, xiriirada aad iPad. Hadda, download this qalab ay leeyihiin isku day ah?